Aogositra 1, 2018 Admin
Banky Hivaingana kosa hery Koreana crypto fifanakalozana Bithumb mba mankarary kaonty vaovao
Manomboka anio Aogositra 1, Bithumb, iray amin'ireo Korea ny 'lehibe efatra' fifanakalozana, dia namoaka vaovao intsony kaonty virtoaly ny mpanjifa noho ny tsy fisian'ny mpiara-miasa amin'ny banky. Bithumb hoy ny Hivaingana kosa tsy fiantraikany mpanjifa izay efa manana kaonty ao amin'ny virtoaly ampiasaina amin'ny fifanakalozana mipetraka sy ny withdrawals banky mifandray amin'ny alalan'ny kaonty. Fa ny teny manodidina, Koreana Tatsimo dalàna nampihatra fa cryptocurrency ara-barotra ihany no avela ho an'ny mpampiasa vola, raha ny anarany amin'ny banky-namoaka ireo tantara virtoaly lalao fa ny kaontiny tao amin'ny cryptocurrency anarany fifanakalozana. Koa, cryptocurrency fifanakalozana ihany koa ny tsy maintsy hanavao ny fifanarahana amin'ny banky isaky ny enim-bolana.
Manam-pahefana avy any Nonghyup hoy ny Banky "Nanapa-kevitra izahay fa tsy mba hanavao ny fifanarahana Bithumb satria mbola manana olana eo amin'ny fiarovana ny mpanjifa sy ny vaovao sy ny fisorohana famotsiam-bola." Vokatr'izany, Bithumb dia nilaozana tahaka ny teo ihany no Korea mpandraharaha ny 'lehibe efatra' fifanakalozana tsy misy fiaraha-miasa ho an'ny virtoaly banky kaonty.
KPMG: Blockchain famatsiam-bola ao Etazonia amin'ity taona ity dia efa nihoatra ny fitambaran'ny 2017
Fampiasam-bola ao amin'ny orinasa blockchain dia miroborobo any Etazonia, araka ny “Big Four” fanaraha mafy KPMG. Published Talata ity, ny orinasa “Pulse ny Fintech 2018” Hoy ny tatitra nentin-drazana barotra renivohitra ny fampiasam-bola ao anatintsika-monina blockchain ho an'ny orinasa ny tapany voalohany tamin'ity taona ity efa nihoatra ny tanteraka ho an'ny 2017. Ny mahavariana antsasaky ny isa isan-taona dia ampahany notarihin'ny $ 100m +-bola manodidina tratra ny fampiasam-bola crypto startup Circle Internet Finance.
KPMG ny Financial Services US Digital sy Fintech Lead Safwan hoy Zaheer “misy kokoa noho ny VC mikoriana misy fahafahana vola, mariky ny fitomboana goavana eo amin'ny toerana. Manokana, ny fampiasam-bola ao amin'ny blockchain avo roa heny ny tapany voalohany 2018 raha mitaha amin'ny 2017. Blockchain manana ny hery anaty mba hanova ny banky ary raha banky rafitra no tokony rewritten amin'izao andro izao izy ireo dia ho mifototra amin'ny blockchain… miely patrana hoe azo ampiharina ny blockchain mba hanampiana ny fiadiana ara-bola ao anatin'ny andrim-panjakana efficiencies.”
Wall Street fikarohana mafy Fundstrat izao manaiky Bitcoin toy ny fandoavam-bola safidy
The Wall Street fikarohana orinasa fampiasam-bola, Fund Trat, ankehitriny mandray vola amin'ny alalan'ny Bitcoin Bitpay. Ny orinasa dia mikendry ny ho vola mora kokoa ny mpanjifa, indrindra fa ireo hita ivelan'ny Etazonia, alalan 'ny fanesorana ny “hassles ny vola fandikan-teny.” Thomas Lee, Ny Tale Fundstrat Partner & ny renound cryptocurrency hoy mpandalina “Fundstrat nahita fa nanaiky fandoavam-bola amin'ny alalan'ny BitPay dia be tsotsotra, haingana sy tsy dia lafo noho ny banky tariby.”
Nilaza fa ny “fikarohana voalohany mafy mba hanomboka fanekena crypto vola avy amin'ny mpanjifa”, Bitcoin safidy ny fandoavam-bola dia ho hita ho an'ny rehetra ny mpanjifa Fundstrat, izay ahitana rafitra mpampiasa vola, harena mpanolo-tsaina, vola fisotroan-dronono, ary harato avo manan-danja ny olona. Farany, ny orinasa dia nandresy lahatra ny fandoavam-bola vaovao ho safidy “dinganina lafo vidy, sarotra miampita sisintany tariby famindrana sy mandray na mandefa vola iraisam-pirenena amin'ny tanteraka araka ny marina, aotra ny hosoka mety sy haingana banky ponenana.”
$10.7T pananana mpitantana Northern Trust manokatra asa ara-bola ho an'ny Bitcoin fefy vola
Asa ara-bola goavana Northern Trust, izay laharana faha-486th amin'ny Fortune 500 Lisitry ny lehibe indrindra orinasa Amerikana, dia niditra ny cryptocurrency tontolo iainana. Ny 129 taona Chicago miorina mafy, izay manjohy ny rafitra mpampiasa vola, fikambanana, ary harato avo manan-danja ny olona, dia nanomboka hanokatra ny sasany ny tolotra mba cryptocurrency fefy vola ihany koa raha trandrahana ny fomba hampidirana blockchain teknolojia ho fizarana ny hitsiny manokana.
Northern Trust dia voalaza fa efa niara-niasa tamin'ny 3 "Fefy vola mahazatra" izay nanomboka mangina manampy cryptocurrency fampiasam-bola ny Portfolios rehefa mikatsaka ny hahazo hatsiaka ny nascent fa hihamaro be ny crypto tsena. Northern Trust manana Tombanana $10.7 tapitrisa tapitrisa ao am-ponja sy ny fananana eo ambany fitantanana, araka ny namany Sary.